यदि जौँ नवरात्रिमा यसरी बढ्छ भने यो अशुभताको संकेत हो, हुन सक्छ वर्षभरि घाटा
नवरात्री को पहिलो दिन मा, कलश को स्थापना संगै माटोको भाँडामा जौँ रोपिन्छ । जौँ को उपज अथवा जौँ कसरी बढ्छ, यसले सम्पूर्ण बर्ष भरिको शुभ र अशुभ संकेतको बारेमा देखाउँछ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यदि रोपेको जौँ उम्रिर्दैन, भने यो अशुभ मानिन्छ र आगामी बर्षमा आर्थिक समस्या झेल्नुपर्नेछ भन्ने जनाउँछ ।
शारदीय नवरात्र अक्टोबर ७ देखि सुरु भएको छ । शुभ दिनमा घटस्थापना संगै पहिलो दिनमा शैलपुत्रीको पूजा गरिन्छ र कलश को अगाडी माटोको भाँडोमा जौँ रोपिन्छ र यसको पनि पूजा गरिन्छ । आखिर, नवरात्रिमा जौँ रोप्ने महत्व के हो र यो किन पूजा गरिन्छ, यसबारे जानौँ :
सृष्टिको पहिलो बाली
ज्योतिषी करिश्मा कौशिकले बताए अनुसार नवरात्रीमा सृष्टिको प्रारम्भमा पहिलो बाली जौँ थियो । जौँलाई पूर्ण बाली पनि भनिन्छ । जौँ रोप्नुको मुख्य कारण अन्न ब्रह्मा हो, त्यसैले अन्नको सम्मान गर्नुपर्छ । नवरात्रिको पूजामा जौँ रोप्नु महत्वपूर्ण मात्र हैन, यो कती छिटो बढ्छ, भन्नेकुरा पनि महत्वपूर्ण छ । जौँ नौ दिनमा कति छिटो बढ्छ वा बढ्दैन? यसको वृद्धिको गति के कति हो ? भन्ने यी सबै कुराले हाम्रो आगामी वर्षको भविष्य पनि बताउँछ ।
यसरि थाहा हुन्छ राम्रो र नराम्रो संकेत
यदि जौँ रोपिएको छ र कुनै कारणले बढ्न सक्दैन, भने यसले आउँदो वर्षमा पैसा वा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरु हुनेछन् भन्ने संकेत गर्छ । यदि जौँ रोपेको तीन दिनमै बढ्न थाल्छ र ६ दिनमा राम्रो र हरियो बन्छ भने यसले आउँदो वर्षमा धन प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने शुभ संकेत गर्छ, र विवाह योग्य उमेर भएकाको विवाह हुनेछ । यसका साथै, यसले हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ भन्ने बताउँछ । अर्कोतर्फ, जब जौँ बढ्दै छ र यसको जराहरुको नजिक सफापन देखिन्छ, हल्का हरियो रंगमा बढ्दैछ, भने यसले प्रारम्भिक बर्षहरु समस्यामा हुनेछ भन्ने संकेत गर्छ, तर बिस्तारै तपाइको जीवनको समस्याहरु कम हुँदै जानेछन् ।
सातौँ र आठौँ दिनमा, जौँ तलतिर झुक्न थाल्छ, भने यसले प्रारम्भिक वर्ष राम्रो हुनेछ, भन्ने देखाउँछ । तर बर्षको अन्त्यमा समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ, स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ । यदि जौँ कालो रंगमा बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ भने यसलाई अशुभ मानिन्छ । यदि जौँ बाक्लो र हरियो हुदै बढ्छ, भने यसले पूरै वर्ष राम्रोसँग जाँदैछ भन्ने संकेत गर्छ ।
दसैँघरमा विधिपूर्वक राखियो जमरा
पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि सामुहिक प्रतिवद्धताको जरुरी